प्रभु लाइफको आइपिओ बाँडफाँड कहिले ? बिक्री प्रबन्ध सिद्धार्थ क्यापिटलको यस्तो छ तयारी - Arthasansar
सोमबार, ०६ पुस २०७७, ०५ : ५५ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं– प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको आइपिओको बाँडफाँड कहिले हुन्छ ? आम लगानीकर्ताको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो । लगानीकर्ताको यो प्रश्नलाई arthasansar.com ले बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटललाई सोधेको छ ।
प्रश्नमाथि क्यापिटलको जबाफ यस्तो छ : 'हामी अहिले आइपिओमा परेको आवेदमाथि भेरीफाइ गर्ने काम गरिरहेका छौं । छिटो भन्दा छिटो बाँडफाँड गर्ने तयारीमा हामी छौं, सायद योहप्ताभित्र बाँडफाँड गर्ने गरी कार्य भैरहेको छ । मिति नै अहिले नै तोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, भेरीफाइको काम छिटो भन्दा छिटो सकी प्रि अलोटमेन्ट गरी बाँडफाँड गर्ने कार्यमा लागि परेका छौं ।'
आइीपिओमा १० लाख ८२ हजार एक सय ४३ जना आवेदकले २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९२ लाख ८७ हजार ४ सय ३० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । यो सर्वसाधारणका लागि माग गरिएको भन्दा ५.४२ गुणा धेरै हो ।